ကိုတိုနိုနေ လက်ဘနွန် နိုင်ငံသားများ မှ ကံကြမ္မာ ဆိုးလှသည့် ဘီနင် နိုင်ငံ ကျောင်းသားများ ထံ သွားရောက် လည်ပတ် ၊အားပေး ။ ။ photos
ဇနျနဝါရီ ၁၅, ၂၀၂၀ - ၈:၃၁ ညနေ
အဗ်နာ ။ ။ လူမျိုး ခွဲခြားမှု ကို ရှုတ်ချ ပြီး မနုဿလူသားများ သည် ကျနော်၏ ညီအစ်ကို များဆိုသည့် ညာသံ ဖြင့် ကိုတိုနိုနေ လက်ဘနွန် နိုင်ငံသားများ မှ ကံကြမ္မာ ဆိုးလှသည့် ဘီနင် နိုင်ငံ ကျောင်းသားများ ထံ သွားရောက် လည်ပတ် ၊အားပေး ခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါတယ် ။
မဂ်ျလစ်စေ ဇဲဟ်ရဟ် (سلام الله علیها ) ကျင်းပ ၊ သြစတေးလျ ။ ။ photos
ဇနျနဝါရီ ၁၃, ၂၀၂၀ - ၁၀:၄၁ ညနေ
အဗ်နာ ။ ။ သြစတေးလျ နိုင်ငံဆစ်ဒနီ မြို့ တွင် ကိုယ်တော်မြတ် ကြီး မိုဟမ္မဒ် ( صلی الله علیه وآله) ၏ သမီးတော် ဘီဘီ ဖွာတေမာ ဇဲဟ်ရဟ် (سلام الله علیها ) ရှဟာဒသ် အထိမ်းအမှတ် အဖြစ် မဂ်ျလစ် ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။
ရှဟီးဒ် ဆိုလိုင်မန်နီ နှင့် အတူ ကျဆုံးခဲ့သည့် ရှဟီးဒ်သည် များ အတွက် ကုရ်အာန် ခွါနီ နှင့် မဂ်ျလစ် ကျင်းပ ၊ ဂါနာ ။ ။ photos
ဇနျနဝါရီ ၁၃, ၂၀၂၀ - ၁၀:၁၆ ညနေ
အဗ်နာ ။ ။ ဂါနာ နိုင်ငံ ၏ မြို့တော် အာဂရာ မြို့ တွင် ရှီအာမွတ်စလင်မ်များ မှ ရှဟီးဒ် ဆိုလိုင်မန်နီ နှင့် အတူ ကျဆုံးခဲ့သည့် ရှဟီးဒ်သည် များ အတွက် ကုရ်အာန် ခွါနီ နှင့်မဂ်ျလစ် ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။
ရှဟီးဒ် ဟာဂ်ျ ဗိုလ်ချုပ် ကြီး ကာစင်မ် ဆိုလိုင်မန်နီ အတွက် မဂ်ျလစ်ကျင်းပ ၊ နိုင်ဂျီးရီးယား ။ ။ photos
ဇနျနဝါရီ ၉, ၂၀၂၀ - ၁၂:၁၅ နံနကျ
အဗ်နာ ။ ။ နိုင်ဂျီးရီးယား နိုင်ငံ ကာဒူနာ မြို့ တွင် အကြမ်းဖက်သမား အမေရိကန် တို့၏ ယောက်ကျား မဆန်သည့် ချောင်း တိုက်မှုကြောင့် ရှဟီးဒ် ဖြစ်သွားရသည့် ရှဟီးဒ် ဟာဂ်ျ ဗိုလ်ချုပ် ကြီး ကာစင်မ် ဆိုလိုင်မန်နီ နှင့် ရှဟီးဒ် ဖြစ်သွားသည့် အပေါင်းအပါးများ အတွက် မဂ်ျလစ်ကျင်းပ ခဲ့ပါတယ် ။
အစိုးရအနေဖြင့် ရှိက်္ခဇက်ဇာကီ အတွက် တရားဝင် လမ်းများကို ပိတ်ပင်ထားပါတယ် / စဟီးလာ ဇက်ဇာကီ
ဒီဇငျဘာ ၁၁, ၂၀၁၉ - ၁၀:၃၅ ညနေ
ရှိက်္ခဇက်ဇာကီ ၏ သမီး စဟီးလာ ဇက်ဇာကီ အနေဖြင့် မိမိ မိဘ နှစ်ပါး ၏ ဆိုးရွား လာသည့် ကျန်းမာရေးအခြေကိုထိန်းချုပ် နိုင်ရန် ကိစ္စ နှင့် ပတ်သက်ပြီး မိဘနှစ်ပါး အတွက် ထိန်းချုပ်နိုင်မည့် တရားဝင် လမ်းများကို အစိုး ရမှ ပိတ်ပင်ထားကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အောကျတိုဘာ ၂, ၂၀၁၉ - ၁၁:၃၅ ညနေ
တောင်အာဖရိနိုင်ငံ မြို့တော် ကိပ်တောင်းက ဗလီဝတ်ကျောင်းတော်တစ်လုံးဟာ နိုင်ငံရဲ့ သမိုင်းအမွေအနှစ်တစ်ခုအဖြစ် ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်မှာ သတ်မှတ်ခံလိုက်ရပါတယ်။ Al-Jaamia Masjid လို့ အမည်တွင်တဲ့ အဲဒီဗလီဟာ ကိပ်တောင်းမြို့ ဆင်ခြေဖုံးက ကလာရာမောင့် ရပ်ကွက်မှာ တည်ရှိတာ ဖြစ်ပါတယ်။ တောင်အာဖရိက နာမည်ကျော် လူဖြူလူမည်း ခွဲခြားမှု တိုက်ဖျက်ရေး တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ အဘ်ဒူလာ ဟာရွန်က ဒီဗလီကို တည်ထောင်ခဲ့ပြီး၊ ၁၂ နှစ်လောက် ရှေ့ဆောင်အီမာမ်ဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်။
စကျတငျဘာ ၂၃, ၂၀၁၉ - ၈:၁၉ ညနေ
အဗ်နာ ။ ။ လိုင်ဘေးရီးယား နိုင်ငံ ၏ မြို့တော် တွင် ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန် သင်ကြား သည့် မဒဲရ်စာ တစ်ခု တွင် မီးလောင်းမှု တစ်ရပ် ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။၎င်း ဒဏ်ကြောင့်ကျောင်းသား၂၆ ဦး သေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ မီးလောင်းသည့်ဖြစ်ရပ်မှန် အကြောင်းအထိအကျ အား မကြားသေးကြောင်း သိရှိခဲ့ရပါတယ်။
ဩဂုတျ ၂၄, ၂၀၁၉ - ၉:၁၀ ညနေ
အဗ်နာ ။ ။ အာဖရိကတိုက် ရှိ ကင်မရွန်း ၊ မာလီ နှင့်မာဒါဂတ်စကာ နိုင်ငံ တို့ တွင် အီးဒ်ဒေဂဒီးရ် မြင်ကွင်း အချို့ ၏ ပုံရိပ်တို့ ဖြစ်ပါတယ် ။
ဩဂုတျ ၂၁, ၂၀၁၉ - ၈:၃၉ ညနေ
အဗ်နာ ။ ။ အီးသီးယို ပီးယား နိုင်ငံ ရှိ မွတ်စလင်မ်များ ၏ ဘဝ ပုံရိပ် အချို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ဩဂုတျ ၁၆, ၂၀၁၉ - ၁၁:၅၃ ညနေ
အဗ်နာ ။ ။ အာယာသွလ္လာဟ် ရှိက်္ခ ဇက်ဇာ ကီးအား အိန္ဒိယ နိုင်ငံမှ နိုင်ဂျီးရီးယားသို့ ပြန်ရောက် ပြီးထောင် ချခံရ ကြောင်း သတင်းရရှိပါတယ်။
ရှိက်္ခ ဇက်ဇာကီ နှင့် ၎င်း ၏ ဇနီး အား ထောက်ခံသည်အနေဖြင့် ဆန္ဒပြ ၊ပါကစ္စန် ။ ။ photos
ဩဂုတျ ၁, ၂၀၁၉ - ၉:၅၆ ညနေ
အဗ်နာ ။ ။ ပါကစ္စတန် နိုင်ငံ ကာရာချီ မြို့ တွင် အမှန်တရား ကို မြတ်နိုးသူ ထောင်ပေါင်းများ စွာမှ ရှိက်္ခ ဇက်ဇာကီ နှင့် ၎င်း ၏ ဇနီး အား ထောက်ခံသည်အနေဖြင့် ဆန္ဒပြ ပွဲကို ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန် အာဂုံဆောင် စင်တာ အသစ် များ ဖွင့်လှစ် / အီဂျစ်
အီဂျစ်နိုင်ငံ၏ အလ်အက်ဆွရ် နယ်မြေရှိ ဝတ္တကအဖွဲ့ ၏ သတင်းအထောက်အထားအရ ကျမ်းတော် မြတ်ကုရ်အာန် အာဂုံဆောင် စင်တာ အသစ် များ ဖွင့်လှစ် ခဲ့ ကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
ဩဂုတျ ၈, ၂၀၁၇ - ၈:၄၇ ညနေ
မေ ၁, ၂၀၁၇ - ၉:၅၁ ညနေ
သခင်မကြီး ဇိုင်နဗ် (စ.အ) ၏ မွေးနေ့ အခမ်းအနား ကျင်းပ ၊ နိုင်ဂျီးရီးယား / photos
ဖဖေျောဝါရီ ၆, ၂၀၁၇ - ၁၀:၁၅ ညနေ
အဗ်နာ ။ ။ သခင်မကြီး ဟဇရသ် ဇိုင်နဗ် (စ.အ) ၏ မွေးနေ့ အခမ်းအနား ကို နိုင်ဂျီးရီးယား နိုင်ငံ ဗါဝဂျီ မြို့ တွင် စည်းကား စွာ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။
ဟိုစိန် (အ.စ) မည်သူနည်း ? ဆိုသည့် အဖွဲ့ မှ ကျောင်းသားများ ကို လက်ဆောင် ပစ္စည်း ပေးကမ်း ၊ ကွန်တို နိုင်ငံ / photos
ဒီဇငျဘာ ၁၀, ၂၀၁၆ - ၁၁:၃၈ ညနေ
အဗ်နာ ။ ။ကွန်တို နိုင်ငံ ကင်ရှားစာ မြို့ တွင် ဟိုစိန် (အ.စ) မည်သူနည်း ? ဆိုသည့် ရှီအာ အဖွဲ့ မှ ကျောင်းသားများ ကို လက်ဆောင် ပစ္စည်း ပေးကမ်း များ ပေးခဲ့ပါတယ်။
နိုင်ဂျီးရီးယားတွင် ရွှေမိုင်းတူးဖော်ရေးစခန်းကို သေနတ်သမားများပစ်ခတ်၊ ၃၆ ဦး သေဆုံး
နိုဝငျဘာ ၉, ၂၀၁၆ - ၆:၂၇ ညနေ
နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံ အရှေ့မြောက်ပိုင်း ဇမ်ဖာရာပြည်နယ် မာရူခရိုင်ထဲက ရွှေမိုင်းတူးဖော်ရေး စခန်းနေရာမှာ သေနတ်သမားတွေပစ်ခတ်လို့ ရွှေတူးဖော်ရေးမိုင်းလုပ်သား ၃၆ ဦး သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီဒေသထဲက ဆက်တိုက်ဖြစ်နေတဲ့ တိုက်ခိုက်မှုတွေထဲမှာ ဒီဖြစ်ရပ်ဟာ နောက်ဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့ သေနတ်ပစ်ခတ်မှုလည်း ဖြစ်တယ်လို့ နိုဝင်ဘာ ၉ ရက်နေ့ ဘီဘီစီသတင်းတပုဒ်မှာ ဖော်ပြပါတယ်။